Isbahaysi ka dhan ah dowladda Itoobiya oo maanta lagu wado in la shaaciyo | Star FM
Home Caalamka Isbahaysi ka dhan ah dowladda Itoobiya oo maanta lagu wado in la...
Isbahaysi ka dhan ah dowladda Itoobiya oo maanta lagu wado in la shaaciyo
Iyada oo ay soo badanayaan kooxaha sida wayn uga soo horjeeda dowladda dhexe ee dalka Itoobiya qaybo ka mid ah dalkaasina ay ka socdaan dagaallo u dhaxeeya xukumadda Addis Ababa iyo kooxaha fallaagada ah ayaa dhanka kale kooxaha mucaaradka ee diiddan xukunka ra’iisul wasaare Abiy Axmad waxay sheegeen inay samaysanayaan isbahaysi cusub .
Isbahaysigan oo ay ku midaysan yihiin ilaa 9 koox ayaa waxaa ugu waawayn ururrada TPLF, OLA, iyo dhaqdhaqaaqa Agaw Democratic Movement.
Kooxaha samaysanaya isbahaysiga qaar badan oo ka mid ah waxay adeegsanayaan dagaalyahaano hubaysan.
Itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo sokeeye iyo culaysyo kaga imaanaya dhanka dibadda.
Isbahaysigan cusub ayaa ku soo aadaya xilli ergayga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan qaradda Afrika , Jeffrey Feltman, uu booqasho ku joogo magalada Addis Ababa isaga oo waan waan ka dhex wada dhinacyada isku maan dhaafsan talada wadanka Itoobiya.
Tan iyo intii uu gaaray halkaasi waxaa uu kulamo la qaatay guddoomiyaha midowga Afrika Muusa Faki Maxamad iyo mas’uliyiin kale oo ka tirsan dowladda itoobiya oo ay ka mid yihiin wasiirada difaaca, maaliyadda iyo ku xigeenka ra’iisul wasaaraha dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda, wuxuuna kala hadlay sidii loo damin lahaa colaadda ka taagan dalkaasi.
Ma cadda ilaa iyo hadda in uu la kulmi doono ergayga Maryakanku ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmad, iyada oo dowladaha Maraykanka iyo Itoobiya ay isku khilaafsan yihiin colaadda ka tagan gobalka waqooyi ee Tigray iyo habka xukumadda Addis-ababa ay u wajahday.
Xooggaga Tigray-ga ayaa toddobaadkan la wareegay magaalooyin dhowr ah oo katirsan gobalka Axmaradda waxayna sheegeen inay kusii ruqaan sanayaan magaladda caasimadda ah ee Addis-ababa.
Isbahaysiga cusub ayaa loo samaynayaa sidii uu wax uga beddeli lahaa waxyeelada uu taliska Abiy u gaystay shucuubta Itoobiya sida ay hadalka u dhigeen.
Previous articleDHAGEYSO:Hirshabeelle oo sheegtay inay dib u fureen waddooyin muddo xirnaa
Next articleDowladda oo amartay in laga hor taggo badeecadaha sharci darrada ah ee dalka la soo geliyo